स्वैच्छिक अवकाशको विषयमा प्रधानमन्त्री र समान्य प्रशासनमन्त्रीको धारणा बाझिएपछि…. – .:: Welcome to Saurahaonline.com
स्वैच्छिक अवकाशको विषयमा प्रधानमन्त्री र समान्य प्रशासनमन्त्रीको धारणा बाझिएपछि….
काठमाडौँ,४ चैत ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो । एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो ।
पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
आज दशैँको सातौँ दिन : कालरात्रिको आराधना तथा फूलपाती भित्र्याइँदै	३० आश्विन २०७५, मंगलवार ०९:०१
चितवनमा क्वारेन्टाईनको मनपरी,स्वास्थ्य जाँच बिनानै खसी बोका तथा च्याङ्ग्राको ब्यापार	३० आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:३३
मेयर बरालद्धारा वडा दशैँको शुभकामना व्यक्त	३० आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:२८
गाडी भाडादर ६ सय, असुल्ने हजार	३० आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:२६
मासु सन्तुलन मिलाएर थोरै खाए प्रोटिन, धेरै खाए दुर्दिन	३० आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:१८
दसैं मनाउन साढे २१ लाख यात्रु बाहिरिए	३० आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:१५
आज दशैँको सातौँ दिन : कालरात्रिको आराधना तथा फूलपाती भित्र्याइँदै
काठमाडौं,३० असोज। हिन्दुहरुको..
प्रकाश सिग्देल, चितवन, ३० असोज ।..
गाडी भाडादर ६ सय, असुल्ने हजार
सिन्धुली,३० असोज । दशैँमा घर फर्कने..
मासु सन्तुलन मिलाएर थोरै खाए प्रोटिन, धेरै खाए दुर्दिन
काठमाडौं,३० असोज । दसैंको बेला मासुका..
काठमाडौं ,३० असोज । दसैं मनाउन २१ लाख..
आत्रेय गोत्रिय दुवाडी सेवा समाज चितवनले आज रत्ननगरमा रहेको होटल स्टार वेन्क्यूटमा दशैं,तिहार र छठको अवसरमा.....
नेशनल एफएमको तिज गित प्रतियोगितामा प्रगति चोक आमा समूह प्रथम
बाघमारामा दोस्रो तीज महोत्सव, तीज गीतमा सावित्री समुह पहिलो
स्याङजा फुटबल संघलाई २४ औं आदर्श कपको उपाधि
नवौँ बार्षिक उत्सवको अवसरमा अर्पण सहकारी संस्था लि.द्वारा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न